စစ်တွေမြို့သစ် စီမံကိန်းမြေကွက်များ စတင်ရောင်းချခဲ့သည့် ဆယ်ရက်အတွင်း မြေကွက် ၂ဝဝ ကျော် အေ?? - Yangon Media Group
စစ်တွေ မြို့သစ်စီမံကိန်းမြေကွက်စတင် ရောင်းချခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် မှ ၁၅ ရက်အထိ ၁ဝ ရက်အတွင်း မြေကွက် ၂ဝဝ ကျော် ရောင်းချထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ စစ်တွေမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် BXT I International Co,Ltd တုိ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဖော်ဆောင်နေသော မြေဧက ၉ဝ ခန့်ရှိ Sittwe Waterfront Project အတွက် စီမံကိန်း ဖော်ဆောင်မည့် မြေကွက်ပေါင်း ၆ဝဝ ရှိကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေမြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် မြေတစ်စတုရန်းတစ်ပေလျှင် အနိမ့်ဆုံးကျပ်နှစ်သောင်းခွဲမှ အမြင့်ဆုံးကျပ်ခြောက်သောင်းသုံးထောင် ဖြင့် i myanmar House. com မှ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က စတင်တာဝန်ယူရောင်းချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း i myanmar House.com rS MD ဦးနေမင်းသူက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင်ပြောသည်။ ”မြေဧက ၉ဝ အတွက် မြေ ကွက် ၆ဝဝ ရှိတယ်။ ၆ဝဝ မှာ ၂ဝဝ ကျော်ရောင်းထားပြီးပြီ။ ဒီစီမံကိန်း မြေကွက်ကို ဝယ်ယူထားတဲ့သူတွေ ကသူ့မြေကွက်မှာ သူဆောက်ချင်တာဆောက်ခွင့်ရှိတယ်။ ရခိုင်ပြည် နယ်အစိုးရကမြေကွက်ကို ဂရမ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်း ကပြောသည်။ အဆိုပါမြို့သစ်စီမံကိန်းမြေ ကွက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်လည်း အရောင်းပွဲတော်ပြုလုပ်ရောင်းချ ပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
ယင်းမြို့သစ်စီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးမားအကျယ် ပြန့်ဆုံးဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော မြေဖို့ မြေယာစီမံကိန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး စစ်တွေမြစ်ကမ်းပါးတစ်လျှောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန္တရာယ် မဖြစ်စေရန်စင်ကာပူနိုင်ငံမှအဆင့် မြှင့်နည်းပညာများအသုံးပြုဖော် ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းစီမံကိန်းတွင်စုပေါင်းအိမ်ရာ၊ လက်လီလက်ကားဈေးကွက်၊ အလယ်အလတ်အမြင့်ရှိသော ကွန်ဒိုမီနီယမ်များ၊ ဂိုဒေါင်နှင့်ပို့ဆောင် ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုန်သွယ်မှုစီးပွားရေးဇုန်၊ ငါးစက်ရုံများနှင့်အပန်းဖြေနေရာများပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါစီမံကိန်း ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မြေဖို့ ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံ ခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကြရန် ရခိုင်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်စက် မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဦး အောင်ကျော်ဇံက ဖိတ်ခေါ်ထား ကြောင်းသိရသည်။